Stock Exchange Duramazwi reVatangi | Ehupfumi Zvemari
Bhegi Duramazwi reVatangi
Kuisa mari mumusika wemasheya kunoda ruzivo rwekutanga kutyaira mashandiro zviine hukuru hwevimbiso yekubudirira. Izvo hazvigone kuitika kuti mamwe mazwi ane chekuita nesitoko musika haazivikanwe. Nekuti kunze kwezvose zvinogona kutadzisa vashandisi kunyatsoita mashandiro avo mune chero musika wezvemari. Uine chinangwa chikuru chekuvandudza nzvimbo dzako muaccount yako yekutarisa, chero zano rekudyara iwe raunoita.
Izvo hazvidikanwe kuti utonge iwo ehupfumi mazwi ehupamhi hwesimba uye ayo akajairika chaizvo evakuru mamaneja emakambani. Mupfungwa iyi, hapana mubvunzo kuti nezvimwe zvinhu zvekutanga zvinogona kugutsa ichi chikumbiro kana iyo zvinangwa kuti zvibudirire kubva zvino zvichienda mberi. Naizvozvo, haufanire kuramba ruzivo urwu nenzira ipi neipi nekuti nenzira iyi zvese zvichave zviri nani kwauri mumusika wemasheya kubva panguva dzino chaidzo. Hazvishamise kuti chichava chimwe chezvinhu zvinokusiyanisa kubva kune vamwe vadiki nevepakati varimi uye semhedzisiro yemaitiro aya, kuwana mhedzisiro iri nani mumisika yemari.
Saka kuti iwe ugone kuzadzisa izvi zvishuwo kubva ikozvino zvichienda isu kuzokufumura iwe mamwe emazwi ayo inonyanya kushandiswa mune yekudyara nyika. Dzimwe dzadzo dzinogona kunge dzichizivikanwa kwauri, asi vamwe vangatokushamisa iwe nehunyanzvi hwavo. Chero zvazvingaitika, ichave iri nhanho inoenderera munzira dzako dzekufunda pamusika wemasheya. Ehezve, iwe hauna kana chaucharasikirwa uye pane zvakawanda zvinangwa zvaunogona kuzadzikisa neiri diki diki musika wekutengesa iro ratiri kuzokupa kwauri kubva panguva ino. Usarasikirwa nazvo nekuti kuburikidza nazvo iwe unenge uchikwanisa kuwana imwe mari iyo ichaenda kune yako yekutarisa account.
1 Duramazwi: chii chinonzi asset?
2 Kuwedzera kwemari, kuongorora, nezvimwe.
3 Iyo yemutengo mutengo bhendi
4 Unoziva here kuti yebhuruu chip chii?
5 Broker sevamiririri
Duramazwi: chii chinonzi asset?
Nhepfenyuro yezvemari: chero chimbo chakanangidzirwa mukudyara. Ivo vakasiyana kwazvo sezvo vachigona kudaro kubva pane chiito kubva kukambani yakanyorwa kune yakachengetedzwa-inowana kuchengetedzeka, kuburikidza nedzimwe nzira dzekudyara, senge mbishi zvigadzirwa kana simbi dzinokosha.
Chiyero chekuyera: ivo vari mukutungamira kwekugadzira a kukoshesa mazita izvo zvakanyorwa pamisika dzakasiyana dzemari. Chero zvazvingaitika, mamwe eanonyanyo kuzivikanwa ndiMoody's, Standard & Varombo uye Fitch.
Kuchengetedza: ichi ndicho chikamu cheiyo mari yemhuri izvo hazvina kupihwa kunwiwa uye izvo zvinogona kuitwa zvinobatsira kuburikidza nemhando dzakasiyana dzemabhengi zvigadzirwa (nguva dhipoziti, manotsi ekuvimbisa kubhengi kana maakaundi anobhadhara zvakanyanya, pakati pezvimwe zvakakosha). Iine avhareji purofiti yegore rose mumakore apfuura izvo zvisingapfuure zviyero zve1%.
Bhururu: ndiyo tsika yekusimuka kwechikamu chekuchengeteka kana imwe nhumbi yemari. Zvakanaka, kana vachizviwana mune ino mamiriro, mukana chaiwo unovhurirwa pinda mumisika yemari. Kwete zvisina maturo, kana kubudirira kwekuvhiya kuchivimbiswa, zvirinani zvine chekuita nenguva pfupi.
Kuwedzera kwemari, kuongorora, nezvimwe.
: Ichi chiitiko chinowanzoitika chekambani pakati pemakambani akanyorwa pamisika yemari. Iyo inosiyaniswa nekuti kune iko kuwedzera mune yemagariro capital yekambani. Izvi zvinogona kuitwa nekuburitsa zviito zvitsva kana kungoita nekukwira kwezita rezita rezviripo. Inogona kunge iri mukana wakanakisa wekupinda inogara iri yakaoma nyika yemusika wemasheya, kunyangwe ichibva nenzira yakatosiyana kana ichienzaniswa neyechinyakare.
Ongororo yakakosha: inoreva nzira yekuongorora (inoshanda kwete chete kumatura anotengeswa pachena, asiwo kune chero imwe pfuma) inoshandisa iyo yese ruzivo rwuripo pamusika. Nenzira iyi, uye zvichibva paruzivo rwapihwa, mushandisi anozokwanisa kutora sarudzo inodzivirira zvido zvavo sevatengesi vevatengesi. Chero zvazvingaitika, haina hanya neshanduko yemari yemari yakaongororwa.
Tekinoroji yekuongorora: iyi imwe nzira yekufanotaura yemisika yemari. Kunyangwe mune ino chaiyo kesi iyo inofunga nezve mutengo wayo shanduko mazuva ese. Kusvika padanho iro iro rinopa iro rinodikanwa ruzivo pane iyo kukosha. Semuyenzaniso, kutengesa huwandu, yekupinda kana yekubuda nhanho kana kutyora kweanotsigira uye kuramba. Iyi ndiyo nzira inonyanya kushandiswa nevashambadzi vadiki nepakati kuti vagadzire mari yavo kubatsira, kunyange hazvo isina njodzi maererano nekuvimbika kwayo.
Iyo yemutengo mutengo bhendi
Bearish: ndicho chinzvimbo icho uyo investor anotarisira kudzikira mumutengo wechengetedzo, uye izvo zvinogona kumanikidzwa kufarira maitiro aya. Pasina nzira, mune ino chinzvimbo iwe unofanirwa kuvhura nzvimbo nekuti unenge uine ese mavhoti ekusiira iwe chakakosha chikamu chekudyara kwako munzira. Muzviitiko zvese, chichava chiratidzo chakajeka chemitengo yavo, unogona kuvawana vakaderera zvakanyanya kupfuura mutengo wavo wazvino. Kwete pasina, kutengesa kunokunda maererano nekutenga.
Bhendi: icho chinhu chakakosha senge mutengo wepakati pakati payo kukosha kunochinja. Mumusika wemasheya, zvinogona kureva kuti mitengo yavo yafamba muchikamu chimwe chete chekutengesa pakati pe12,45 ne12,98 euros pamugove. Ichakupa iyo chaiyo chaiyo pfungwa nezve izvo zviri kuitika neiyo yemari nhumbi uye iwe uchave unokwanisa kuita sarudzo mumisika yezvemari uine hukuru hukuru vimbiso dzebudiriro.
Bheya: kana iwe uchitaura Chirungu uchitsetsenura, hauzove nedambudziko rekuona kuti izwi iri chikamu che jargon yemari uye zvakaenzana nekuti bearish kuchengetedza kana mari yemari inogona kuve. Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo idzi nevamiriri vese vezvemari kana avo vane hukama nekambani yekudyara.
Mibairo pamugove: inozivikanwa zvakare nechidimbu chayo, BPA, zvinoreva kune mambure purofiti yakakamurwa nenhamba yezvikamu zvakagadziridzwa gore rega. Naizvozvo, inoyera chikamu chemubatsiro icho chinoenderana nechikamu chimwe nechimwe. Iyo musiyano unoshandiswa kuongorora kuti iboka ripi remakambani akanyorwa anofanirwa kuita yako inotevera yekudyara portfolio. Hazvishamisi kuti ndeimwe yedhata inonyanya kukosha pamusika wemasheya, sezvo iwe pachako uchazoziva panguva ino.
Unoziva here kuti yebhuruu chip chii?
Blue Chip: uri kutarisana nerimwe izwi neAnglo-Saxon midzi uye iyo inoshandiswa kune akakurumbira masheya akanyorwa pamusika wemasheya, mune ino kuenda kuSpanish. Idzo chengetedzo dzinoburitswa nemakambani anonyorovesa, ane data rakakosha, uye ndedzenhengo huru dzenyika. Kune rimwe divi, ivo vanozivikanwa ne kondirakiti vhoriyamu yakanyanya kukwirira uye zvirokwazvo iri pamusoro kupfuura mamwe makambani akanyorwa. Iwo matema machipisi emari yenyika ndeye Endesa, Iberdrola, Repsol, BBVA neBanco Santander. Ndokunge, yakakosha pane iyo Ibex 35.
Junk bond: mune ino kesi tiri kureva kune yakatarwa yakatarwa mari chengetedzo iyo inopihwa ine yakanyanya kufarira nemakambani ane njodzi huru. Kana aya akasarudzika marudzi ezvigadzirwa zvemari akasiyaniswa kune chimwe chinhu, imhaka yekuti anosanganisira a njodzi huru kumiswa kwekubhadhara. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kubhadhara yakakosha chikamu chemari yakadyarwa. Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kudzivirira kuvashandira pamusoro pezvimwe zvinhu kana iwe usiri kuda kuwana chero zvimwe zvinoshamisa kubva ikozvino.
Treasure Bond: ndiyo yakagadziriswa mari yechigadzirwa par kugona. Iko chikwereti cheveruzhinji chakapihwa netemu iri pakati pemwedzi mitanhatu negumi nemasere, angangove, anomira kunze. Nemhando dzekudyara dzinosanganisira zvigadzirwa zvinozivikanwa senge zvisungo, zvikwereti zvehurumende kana zvisungo, pamwe nekukura kwavo kunoenderana. Hazvishamisi kuti vanovimbisa kudzoka kwakamisikidzwa gore rega, zvisinei nezvinoitika mumisika yemari.
Broker: zvakare iwe wakatarisana nerimwe izwi reAnglo-Saxon kutsanangura muyananisi mune chero musika. Ehe, inoreva zvese kune vatengesi-vatengesi pamusika wemasheya uye kumabhangi ekupindirana masevhisi. Chero zvazviri, iwo anodikanwa kuitira kuti iwe ugone kushanda nechero mari musika, kwete chete inoshanduka mari asiwo yakagadziriswa mari.
Bund: hapana chimwe kunze kwechisungo chenyika pachikwereti cheveruzhinji chakapihwa nehurumende yeGerman uye icho chine Makore gumi ekukura. Iyo yakakosha kwazvo nekuti inotorwa senge renongedzo sosi yekuverenga maprimiyamu engozi yenyika dzeyuro, kusanganisira iyo yeSpanish.
Musoro nefudzi: ndeimwe yeanomiririra manhamba eaya anonzi tekinoroji kuongororwa uye anozivikanwa nekuti anotarisira a Shanduko yemaitiro Kubva kumusika. Izvo zvakakosha kwazvo kuti iwe ugone kushanda zvakanyanya kubudirira mumusika wemasheya uye ndosaka iwe uchifanira kuzvifunga.
Model portfolio: ndiko kurongeka kweiyo yakakurudzirwa tsika nenyanzvi dzeindasitiri. Izvo zvinowanzo shandira kune imwe nhambo yenguva, kuti ivandudzwe zvishoma nezvishoma zvichienderana nemaitiro emusimari. Zvinogona kugadzirirwa ma profiles anokwanisa kuve nehasha, zvine mwero kana anochengetedza. Muchiitiko icho chimiro chavo chinosiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bhegi Duramazwi reVatangi
Chii chinonzi IPO?
Chii chekuita kana kadhi rakarasika kana kubiwa?